देश चिनाउने फिल्म खोई ? (भिडियो) – mYKantipur.Com
निर्माताहरुले चलचित्र निर्माणको लागत बढाएर किन भन्छन् भन्नेकुरा आफुले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको निश्चल बताउँछन्। '५०/५५ लाख कमाइ हुँदा १ करोड कमाइ भयो भनेर हल्ला हुन्छ अनी केक काटिन्छ।' ए हप्ता दिनमा १ करोड। सबैलाई के लाग्छ सबै फिल्मले पैसा कमाएको छ', दिनेश पनि यो भनाईमा सहमत छन्। कतिपय निर्माताहरु आत्मरतीमा रमाउने गरेको दिनेको बुझाइ छ। 'फिल्म साहित्यको माध्यम हो। यस फिल्डमा आउनेले यसलाई सोच्नु पर्छ। अहिले बनाएर अहिले नै सकिने कुरा होइन। अहिलेको हाम्रो काम हेरेर पछिको पुस्ताले के सिक्ने। यो पनि त सवाल हो', उनी भावी पुस्ता’bout सोच्छन्।
'इरानी फिल्म भने पछि हामीले एउटा धारणा बनाएका छौं। यसले मनमा छुन्छ। प्रजेन्टेसन यस्तो हुन्छ भन्ने सोच्छौं। इरानमा पनि कमर्सियल फिल्म त्यति नै बन्छन् तर हामीलाई ति ’bout थाहा छैन। देश चिनाउने उद्योग चिनाउने फरक कुराले हो। बलिउड फिल्मले पनि काम त गरेका छन् तर लो बजेटका फिल्मले पनि सबैको मन छोएकै छन्', निश्चल आफैलाई प्रश्न गर्छन्, 'हामी यहीँ निर किन चुक्यौं। हाम्रा त्यस्ता फिल्म खोई ?'
सेन्सर वोर्डको भूमिकाले पनि फिल्मकर्मी दिक्क रहेको दिनेश जोड्छन्। के गर्न हुने के नहुने भन्ने’bout कुनै नियम नै नहुँदा समस्या आउने गरेको उनको भनाई छ। १८ वर्ष माथीको सर्टिफिकेट दिएका फिल्म पनि सबैले हेरेको देखिन्छ नियमन खै ? निश्चल प्रश्न गर्छन्। 'विदेशी फिल्ममा आउने शव्द पाच्य हुन्छ। जब आफ्नै भाषामा आउँछ अनी कुरा बिग्रन्छ। आफुले बोल्दा सम्म ठिक हुन्छ। अरुले बोल्दा विग्रन्छ। हाम्रो सेन्सर यस्तै छ', निश्चल भन्छन्। नेपाली फिल्मले मनोरञ्जन दिन सकेमा मात्र धेरै हुने उनी बताउँछन्। 'मनोरञ्जन दिन नसकेको अवस्थामा धेरै अपेक्षा नगरौं। दुई घण्टा रमाइलो त हुन सकेको छैन भने अरु के अपेक्षा गर्ने?', उनी भन्छन्, 'मनोरञ्जन पछि हामी मुद्दामा प्रवेश गरेर फिल्म बनाउँला।'